svchost.exe ကဘာကြောင့်အရေးပါသလဲ? ~ YGNBlogger
04:08 Security, ဗဟုသုတ No comments
svchost.exe ကဘာကြောင့်အရေးပါသလဲ? What is svchost.exe? Is it virus or not?
svchost.exe က Windows ရှိတဲ့စက်တိုင်းမှာအသုံးဝင်ကြတယ်လို့သိတယ်မလား။ အဲ့ဒါကိုမနေ့ကကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ Windows XP စက်မှာ End Process လုပ်လိုက်တယ်။ အဲ့မှာ Blue Screen Error ကြီးတက်လာတယ်။ လက်ယားကြည့်တာနော်။ဘာလို့အရေးပါသလဲဆိုတာသိရမှာပါ။
svchost.exe က virus လို့ထင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက svchost.exe က စက်ရဲ့အဓိကအရာလေးပါ။ svchost ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ Service Host ပါ။ အဲ့ဒါ virus မဟုတ်ပါဘူး။ svchost.exe က virus တက်သွားရင် စက်က ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့တာသိသိကြီးပါ။ အဲ့ဒီ svchost.exe ကိုရပ်မယ့်နည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆော့ဝ်လ်သုံးရမှာပါ။ Windows Task Manager နဲ့လုပ်ရင် ဒိုင်းဒိုင်းဖြစ်ကုန်မယ်ဗျာ။ လုပ်နည်းကတော့ နောက်မကြာမီပြောမှာပါ။
အဲ့ဒီ svchost.exe က function အများကြီးကိုလုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက်သတ်လို့မလွယ်ပါဘူး။ Virus ၀င်သွားရင် သတ်တဲ့နည်းရှိပါတယ်။ Virus ၀င်သွားရင် Windows တင်ရင်တောင်အစဉ်မပြေပါဘူး။
သိရသလောက်တင်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်ကပညာရှင်မဟုတ်ပါ။ ပြည့်ဖြိုး...